ထပ်တစ်ရာ ကောင်းကောင်း၊ ဆိတ်စွပ်ပြုတ် ကောင်းကောင်း နဲ့ လက်ဖက်ရည် ကောင်းကောင်း သောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် ၁၂-လမ်း၊ လမ်း-၈၀ နဲ့ ၈၁ လမ်းကြားမှာ ရှိတဲ့ လက်ရွေးစင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ မြည်းစမ်းကြည့်ကြပါ... ကျုံးရဲ့ အနောက်မြောက်ထောင့်ရောက်ရင် ဆိုရင်ဖြင့် လက်ရွေးစင် လက်ဖက်ရည် မေးမြန်းလို့ရပါပြီ... ညဘက်တော့ မဖွင့်ပါဘူး... ၅-နာရီ ဝန်းကျင်လောက်အထိပဲ ဖွင့်တယ် ထင်ပါတယ်... မန္တလေး မြောက်ပြင်ရဲ့ နာမည်ကြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ပါ...
ညနေစောင်းက စပြီး ညဘက်အထိ ချပါတီကောင်းကောင်း စားချင်တယ်ဆိုရင် ၈၂-လမ်းနဲ့ ၂၇-လမ်းထောင့်၊ Unity Hotel နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ တည်ရှိတဲ့ နေ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ညွှန်းပါရစေဗျာ... အဲဒီ အနီးနား ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပုံတူရိုးမှား နာမည်ပေးထားတဲ့ ဆန်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လည်း ရှိတယ်ဆိုတာ သတိပြုပါ... မြို့မ ရုပ်ရှင်ရုံကနေ နောက်ဘက် နောက်လမ်းထောင့်မှာ ရှိတာပါ... ချပါတီ အပြင် အခြား အိန္ဒိယ အစားအစာများလည်း ရနိုင်ပါတယ်...
အပေါ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ၂-ဆိုင်သွားပြီး မောင်လှလည်း အိန္ဒိယ အမျိုးအနွယ်ဝင်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့... မောင်လှ ဆိုတာ ဗမာစစ်စစ် အညာသားပါ...
မန္တလေး ထမင်းပေါင်း၊ အနီရောင်ဆော့ မပါဘဲ သုတ်ထားတဲ့ ဝက်သားသုပ်နဲ့ အခြား ခေါက်ဆွဲ၊ ဆီချက် အစားသောက်ကောင်းစားချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် ၈၄-လမ်းနဲ့ ၃၂-လမ်းထောင့် ဓာတ်ဆီဆိုင်ဘေးမှာ ကပ်ဖွင့်တဲ့ တွန်းလှည်းနဲ့ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ကလေးမှာ သွားစားကြည့်ကြပါဦး... မန္တလေးက နာမည်ကျော် President store ဆိုင်နဲ့ မျက်နှာစောင်းထိုး လမ်းထောင့်မှာ တည်ရှိတာပါ... ညနေ ၆-နာရီ ဝန်းကျင်မှ စဖွင့်တဲ့ဆိုင်ပါ...
Digital Camera ထဲက ဓာတ်ပုံပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖလင် ကင်မရာထဲက ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်၊ CD, Memory Stick ထဲက ဓာတ်ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကာလာ စိုစိုပြေပြေ ဓာတ်ပုံကောင်းလေးတွေ ကူးချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဒီလ ၅-ရက်နေ့ကမှ အသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ နဝရတ် ဖူဂျီကာလာ ဓာတ်ပုံကူးဆိုင်မှာ သွားရောက် စမ်းကူးကြည့်ကြပါလို့ လမ်းညွှန်ပါရစေ... အခြားဆိုင်များနဲ့ မတူတာက digital media များနဲ့ လာကူးရင် virus စစ်ဆေးပြီးမှသာ ဖိုင်ကို လက်ခံယူခြင်းပါပဲ... 4x6 ဆို ၉၀-ကျပ်၊ 5x7 ဆို ၁၅၀-ကျပ်၊ 8x10 ဆို ၅၀၀-ကျပ်၊ ၁၀x၁၂ ဆို ၆၀၀-ကျပ်၊ 10x14 ဆို ၇၀၀-ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်...
My Labels: မန္တလေး, Mandalay News
Mandalay News မန္တလေး
Steven Alexander said…
ရောင်နီလာတဲ့ မိုးသောက်တိုင်းမှာ လွမ်းတယ်
နေ ကဖေးက ဂျပါတီလည်း လွမ်းတယ် :))
ကျွန်တော်က မန်းသားစစ်စစ်ပါ နေတာက တရုပ်တန်းမှာပါ မွေးတာက စိန်ပန်း ကျောင်းက မူလတန်းကို တာရဲတန်းမှာ တတ်ပြီး ၁၄ ကျောင်းထွက်ပါ။ မနလေးနဲ့ ဝေးခဲ့ရတာ ၁၀ နှစ်လောက်ရှိပြီဗျာ.. အရမ်းလဲလွမ်းတယ်။ ခုလို မနလေးက ဆိုင်တွေ ရေးထားတာတွေ့ တော့.. ။ အတော် တော်လေးကို လွမ်းမိတယ်။ ကျွန်တော် နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မြန်မာပြန်လာတော့.. ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းက လိုက်ကျွေးတဲ့ မြီးရှည် ဆိုင် ရှိတယ်။ မလွန်ဖက်မှာဘဲ။ ဟိုကွေ့ဒီကွေ့ ၀င်းကြားတွေထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ ဆိုင်ကို မသိတော့ဘူး။ ကျွန်တော် ရန်ကုန်မှာနေတုံးက မြီးရှည်ဆိုင်ကောင်းကောင်းဆိုလို့ ဗထူးကွင်းနားက ဆိုင်ဘဲသိတာ။ အခု အဲဒီဆိုင်ကို တော့ မသိဘူး။ သိရင်တစ်ဆိတ်လောက်ဗျာ ဒီတခေါက်ပြန်လာရင် သွားစားချင်လို့ပါ။ နောက် မနလေးနဲ့ ဝေးနေပေမဲ့ မနလေးသတင်းတွေကို အမြဲနားစွင့်နေတယ်။ ထူးထူးခြားခြားလေးတွေ ကို ပို့စ်လုပ်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
your post made me miss mandalayalot. i wanna try all the food that you recommended. thanks.